Fiisigis - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Fiisikis)
Fiisikis E = m c 2
Fiisigis waa erey Giriig ah (φύσις) oo macnahiisu yahay Dabeecad (Carabi:فيزياء Ingiriis: Physics) waa cilmiga barashada Maatarka iyo dhaqdhaqaaqiisa ee u dhaxeeyso mudo, sida Ileyska. Kulka, Dhaqdhaqaaqa IWM, Taagta Walxaha Xoog oo la hoos dhigay Bed, ama awooda xoog uu ku hayo qeyb dululaatiga ka mida waxaa loo yaqaanaa cadaadis. Waxaana cadaadiska lagu suntaa xaraf giriiga, kaasoo ah σ (sigma).
Dhawr sawir oo isugu jira kuwa dabiici ah iyo kuwa lasameeye dhamaanna waxaa lagu bartaa Fisigiska
Haddii cadaadisku togan yahay waxaa loo yaqaanaa cadaadis kala-jiidan, haddii uu taban yahayna waa cadaadis isku urur.
labo tuubo oo qaab dhululubo leh kalana ah AB iyo BC, ayaa la iskula alxamay barta B ee jaantuska hoose, kadibna la saaray xoogaga ka muuqda jaantuska. Soosaar laxaadka xooga P, haddii cadaadis kala-jiidanka tuubada AB uu la mid yahay labanlaabka laxaadka cadaadis isku-ururka tuubada BC.
waa cilmi laku barto fahamka asaasika eh sida (culeyska-awooda-zamanka,waqtika) iyo waxwalbo oo kafarcamo, waa falaqeeynta guud ee dabeecadda, waxana oo kuu sheeygaa fahmaka caalamka ama aduunka aan ku noolnahay. qoraaka: Yusuf shaami
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiisigis&oldid=184849"
Last edited on 4 Nofeembar 2018, at 01:21
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Nofeembar 2018, marka ee eheed 01:21.